एकाबिहानै अन्तरजातीय बिबाह गरेका नारायण र साबित्राको जिवनमा भयो नसोचेको घ,टना ! – Classic Khabar
एकाबिहानै अन्तरजातीय बिबाह गरेका नारायण र साबित्राको जिवनमा भयो नसोचेको घ,टना !
August 31, 2021 102
अर्जुनधारा नगरपालिकामा आज सोमबार बिहान एक महिलाको शव फेला परेको छ । आइतबार साँझ आफ्ना श्रीमान नारायण बिश्वकर्मासँग घरझ ग डा भएपछि घरबाट निस्किएकी अन्दाजी ४० वर्षीया सावित्रा खड्का विश्वकर्माको शव अर्जुनधारा ६ स्थित बिहानी टोलमा आज सोमबार बिहान फेला परेको हो ।
खुदुनाबारी घर भएका विश्वकर्मा परिवार लामो समयदेखि अर्जुनधारा ६ मा बसोबास गर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। उनको शव आज सोमबार बिहान ८ बजे फेला परेको थियो। आइतबार साँझ श्रीमानसँग झ गडा भएपश्चात् उनी घरबाट बाहिर निस्किएको उनका श्रीमान् नारायण विश्वकर्माले बताएका छन्। घरबाट निस्केपछि आफूले खोजी गर्दा पनि उनी फेला नपरेको श्रीमान् नारायणले प्रहरी समक्ष बताएका छन्।
बेपत्ता निज साबित्रा आज सोमबार बिहान सुजन च्याउ उद्योग नजिकै हातमा पैसा बोकेको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर थप अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणि झापाले जनाएको छ ।
घटनाबारे अनुसन्धानका लागि मृतकका श्रीमान् नारायणलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। साथै मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि लैजाने तयारी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Next‘सबैसँगको साथ छुट्यो, म एक्लो भएँ’ भन्दै जब रामकुमारीले योगेश घनश्याम र गोकर्णको अगाडी आँशु खसालीन्, सबै नेता धरधरी रोए
पुजा शर्माको भावुक अन्तरवार्ता : ‘जसका लागि मैले परिवारलाई त्यागेँ उसैले मलाई आँशु दियो, मेरो जिवनको ४ वर्ष मेट्न चाहन्छु’ (भिडियो हेर्नुस्)
पाथीभरा माताले सबैको मनकामना पुरा गरुन, आज फाल्गुन २८ गते शुक्रबार , हेर्नुहोस तपाईको आजको राशिफल कस्तो छ ?